Ọstrelia ga -emepe ụzọ ya maka ndị njem ọgwụ mgbochi nke ọma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Australia » Ọstrelia ga -emepe ụzọ ya maka ndị njem ọgwụ mgbochi nke ọma
Airlines • Airport • Akụkọ na -agbasa Australia • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ezumike ezumike Australia nke mmachi njem ya na -abịa n'agbanyeghị nnukwu obodo abụọ ya, Melbourne na Sydney, na isi obodo ya, Canberra, ka nọ na mkpọchi n'ihi mmụba nke ikpe ndị mere n'obodo ndị mepere emepe na mbido afọ.
Ezumike nke mmachi a ga -enye ụmụ amaala ohere ịga mba ọzọ mgbe ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi steeti ha ruru 80%
Ugbu a, ndị mmadụ na -enwe ike ịpụ na Australia maka ihe pụrụ iche, gụnyere ọrụ dị mkpa ma ọ bụ ịga leta onye ezinaụlọ na -arịa ọrịa na -anaghị ala ala.
A na-amachibido ịlaghachi Australia ugbu a site na oke mbata na ndị na-alaghachi obodo ahụ ga-anọrọ na mgbochi iche ụlọ ezumike ụbọchị iri na anọ.
Australia buru ụzọ mechie ókè ya laa azụ na Machị 2020, machibido ụmụ amaala ya na ndị bi na njem mba ọzọ na -enweghị ikike gọọmentị na ịhapụ ọtụtụ puku ndị Australia rapaara na mba ọzọ.
Prime Minista Australia Scott Morrison
Prime Minista Scott Morrison kwuru taa, "Oge erugo inye ndị Australia ndụ ha azụ." Australia ga-amalite ibelata oke mgbochi oke nke o tiri na mbido ọrịa COVID-19, na-enye ohere ka ụmụ amaala ọgwụ mgbochi gaa mba ofesi.
Mbelata mgbochi COVID-19 ga-enyere ụmụ amaala Australia aka ịga mba ọzọ mgbe ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi steeti ha ruru 80%-ebumnuche eburu na mba niile iji hụ na ntiwapụ nke nje ahụ agaghị akarị ụlọ ọrụ ahụike.
Ugbu a, New South Wales bụ steeti kacha nso n'ọnụ ụzọ ahụ, atọrọ ka erute ya n'ime izu ole na ole, ebe Victoria na -atụ anya na ọ ga -abụ onye nke abụọ ga -emezu ihe achọrọ.
N'oge a, ndị mmadụ nwere ike ịpụ apụ Australia maka ihe pụrụ iche, gụnyere ọrụ dị mkpa ma ọ bụ ịga leta onye ezinaụlọ nke na -arịa ọrịa ọnwụ. A na-amachibido ịlaghachi Australia site na oke mbata na ndị na-alaghachi obodo ahụ ga-anọrọ na mgbochi iche ụlọ ezumike ụbọchị iri na anọ.
Morrison kwukwara na, yana ime ka ọ dịrị ndị ọgwụ mgbochi ọrịa mfe ịga njem, a ga-emebi ihe mgbochi ụlọ nkwari akụ-nke na-efu AUS $ 3,000 ($ 2,100) ma were ikewapụ ụlọ ụbọchị asaa dochie ya.
Ntụrụndụ ahụ agaghị emetụta ndị mbata na ọpụpụ si mba ọzọ ozugbo, n'agbanyeghị na gọọmentị kwuru na ọ na -agba mbọ hụ na obodo a nwere ike 'nabata ndị njem n'ụsọ mmiri anyị'.
AustraliaNtụrụndụ izu ike nke mmachi njem ya na -abịa n'agbanyeghị nnukwu obodo abụọ ya, Melbourne na Sydney, na isi obodo ya, Canberra, ka nọ na mkpọchi n'ihi mmụba nke ikpe mere na isi obodo mepere emepe na mbido afọ.